के तपाईं कम्प्युटरमा नियन्त्रण गर्ने मात्र हुनुहुन्छ? - सेमील्ट विशेषज्ञ
यो सही छ कि केहि मैलवेयर सहित, ransomware सहित, तपाईँको उपकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव छ। तर DDoS botnet मैलवेयरसँग फरक स्तरको प्रकार्य छ, केहि मध्ये तपाईंको यन्त्रको नियन्त्रण लिन सक्दछ र अरूले पृष्ठभूमि फाईलहरूको रूपमा चुपचाप चलिरहेको र जारी राख्ने बोस्ट हेडर वा बोटमास्टरको निर्देशनहरूको प्रतीक्षा गर्नुहोस्। आत्म-प्रोभेटिङ बोटनेट्सले विभिन्न च्यानलहरु मार्फत अतिरिक्त बिटहरू भर्ती गर्दछ। संक्रमणका लागि पथहरू वेबसाइट हानिकारकहरू, प्रयोगकर्ताको निजी आइडी, र ट्रोजन घोडा मैलवेयरमा पहुँच प्राप्त गर्न पासवर्ड फ्रेक गर्न समावेश गर्दछ। यद्यपि, सबैले ह्याकरहरूलाई तपाइँको कम्प्युटर वा मोबाइल उपकरण नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न अनुमति दिन्छ। निस्सन्देह, यो बोटको सही संख्या बिन्दु गर्न लगभग असम्भव छ, अनुमानले देखाएको छ कि त्यहाँ दुई अरब भन्दा बढी छन्।
ब्वाटेननेटहरू किन सिर्जना हुन्छन्?
फ्रैंक निदान, सेल्टल्ट ग्राहक सफलता प्रबन्धकले बताउँछ कि सक्रियता, राज्य-प्रायोजित विघटन, मुनाफाका लागि आक्रमण र अन्य कारणहरूका लागि बटनेटहरू सिर्जना गरिएका थिए। इन्टरनेटमा बटनेट सेवा भर्ती सस्ता छ विशेषगरि यदि तपाईले एक स्प्यामरलाई सम्पर्क गर्न खोज्नु भएको छ।
बूटनेटहरू कसरी नियन्त्रण गरिन्छ?
बोटनेटहरूको मुख्य विशेषताहरू मध्ये एक हो बोस्ट हेडरबाट अद्यावधिक गरिएको जानकारी प्राप्त गर्ने क्षमता हो।.उनी नियमित रूपमा बोटमैस्टरहरूसँग कुराकानी गर्छन्, जसले आक्रमणकारीहरूलाई IP ठेगाना परिवर्तन गर्न र उनको छनौटका केही कार्यहरूलाई अनुकूलित गर्न दिन्छ। बूटनेट डिजाइन फरक फरक छ, र तिनीहरूका ढाँचाहरू बिभिन्न प्रकारका वर्गहरूमा बिच्छेदन हुन्छन्, जस्तै ग्राहक बटनेट मोडेल र सहकर्मीसँग बियरनेट मोडेल।
ग्राहक botnet मोडेल:
जब यो मेशिन केन्द्रीकृत सर्भरमा जडित हुन्छ, र स्प्यामरले तपाइँको व्यक्तिगत विवरणहरू ह्याक गर्न मद्दत गर्दछ। केन्द्रीयकृत सांस ले बूटनेट को लागि केहि विशिष्ट आदेश को कार्य गर्दछ र संक्रमित मिसिनहरु को निर्देश को अद्यतन गर्न को लागि संसाधन सामाग्री को संशोधित गर्दछ।
सहकर्मीसँग बियरनेट मोडेल:
विश्वसनीय र गैर-भरोसेमंद कम्प्यूटरको सूचीहरू को लागी यो मोडेल जिम्मेवार छ जसको साथ हैकरहरूले कुराकानी गर्न र मालवेयर अद्यावधिक गर्दछ। तिनीहरू कहिलेकाँही उनीहरूको आवश्यकताहरूमा आधारित सम्झौता गरिएका मिसिनहरूको संख्या सीमित गर्छन् र प्रयोगकर्ताहरूलाई आफ्नै प्रयोगकर्ता नामहरू र पासवर्डहरू ट्रयाक गर्न कठिन बनाउँछन्। यदि तपाइँ केन्द्रीयकृत कमान सर्भरको कमी हुनुहुन्न भने, तपाईं यस असुरक्षितताको सिकार हुन सक्नुहुन्छ। तपाईंको सुरक्षालाई अधिकतम गर्नको लागि, तपाईले ब्नेटनेटहरू तोक्नु पर्छ र तपाईंको व्यक्तिगत जानकारी इन्क्रिप्ट गर्नबाट रोक्न सक्नुहुन्छ।
सबै यन्त्रहरूमा संक्रमण हटाउनुहोस्:
botnet देखि छुटकारा पाउन को लागि एक शानदार तरीका तपाईंको सबै उपकरणहरुमा संक्रमण को हटाउने हो। व्यक्तिगत यन्त्रहरूको लागि, मेशिनमा नियन्त्रण प्राप्त गर्ने रणनीतिहरू विरोधी मालवेयर वा एन्टिभिरस प्रोग्रामहरू, विश्वसनीय स्रोतहरूबाट सफ्टवेयर स्थापना गरी तपाईंको क्यास सफाई गर्न समावेश गर्दछ। एकपटक गरेपछि, तपाइँ सजिलै संग बोटनेटहरूबाट छुटकारा लिन सक्नुहुन्छ र इन्टरनेटमा तपाइँको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। आईओटी उपकरणहरूको लागि, तपाइँ कारखाना रिसेट चलाउनुपर्दछ वा तपाईंको आवश्यकता अनुसार उपकरण ढाँचा गर्नु पर्छ। यदि यी विकल्पहरू अयोग्य छन् भने, तपाइँ आफ्नो इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँलाई सोध्नुहोस् कि तपाइँको प्रणाली केही घण्टा वा दिनको लागि बन्द गर्न।